Fampivoarana iWork hanampiana ny mpampianatra sy ny mpianatra | Avy amin'ny mac aho
Toni Cortes | 02/06/2021 14:00 | Programa Mac
Apple dia niasa nandritra ny fotoana ela ary nieritreritra ny fomba mety mahasoa kokoa ny fitaovany estudiantes y mpampianatra. Fantany fa raha zatra mianatra ao amin'ny tontolon'ny Apple ny mpianatra iray dia hanana mpampiasa ho avy azo antoka izy.
Mino izany ny orinasa, ary rehefa mandeha ny fotoana dia mila dingana hanampiana ireo sekoly sy oniversite hiasa amin'ny fitaovana Apple araka izay azo atao, na amin'ny Mac na iPads. Ny suite Miasa aho vao nampiditra fiasa vaovao hanamora ny fiasan'ny mpampianatra sy ny mpianatra ny Pejy, Nomery ary Keynote.
Apple dia mamoaka fanavaozana ireo rindrambaiko fampiharana iWork office suite, mitondra fampiasa vaovao Pages, Numbers y Keynote. Ireo fanavaozana dia mitondra fampidirana vaovao miaraka amin'ny app an'ny Apple's Schoolwork, fiasa vaovao ao amin'ny Nomery, ary fiasa vaovao manan-danja hafa.
Ireo fiasa vaovao amin'ny fampiharana telo ireo dia misy amin'ny kinova 11.1 ho an'ny macOS, iPadOS ary iOS. Andao hojerentsika izy ireo:
Afaka mamorona ianao izao rohy mankany amin'ny pejin-tranonkala, adiresy mailaka ary nomeraon-telefaona amin'ny zavatra toy ny endrika, tsipika, sary, sary, na boaty an-tsoratra.
Ireo mpampianatra mampiasa ny fampiharana amin'ny Sekoly hizarana andraikitra ao amin'ny pejy dia afaka mahita ny fandrosoan'ny mpianatra ankehitriny, ao anatin'izany ny isan'ny teny sy ny fotoana laniny (iPad sy iPhone ihany).
Ireo mpampianatra mampiasa ny fampiharana ao an-tsekoly mba hanomezana andraikitra ao amin'ny Keynote dia afaka mahita izao fandrosoan'ny mpianatra, ao anatin'izany ny fanisan-teny sy ny fotoana laniana.
Toy ny amin'ny Pejy, azonao atao izao ny mamorona rohy mankamin'ny pejin-tranonkala, ny adiresy mailaka ary ny nomeraon-telefaona amin'ny zavatra toy ny endrika, tsipika, sary, sary, na boaty an-tsoratra.
Ireo mpampianatra mampiasa ny fampiharana amin'ny Sekoly hizarana andraikitra ao amin'ny Nomery izao dia afaka mahita ny fandrosoan'ny mpianatra, ao anatin'izany ny isan'ny teny sy ny fotoana laniny (iPad sy iPhone ihany).
Fanohanana ny fiaraha-miasa amin'ny endrika in takelaka nizara (iPad sy iPhone ihany).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampivoarana iWork hanampiana ny mpampianatra sy ny mpianatra